Madaxweynaha Puntland oo Dhagax-Dhigay Dhismaha Wasaarada Arrimaha Gudaha – Radio Daljir
Madaxweynaha Puntland oo Dhagax-Dhigay Dhismaha Wasaarada Arrimaha Gudaha
Juunyo 3, 2015 7:05 b 0
Arbaco, Juun 03, 2015 (Daljir) — Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 3-6-2015 magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ka dhagax dhigay dhisme cusub oo ay dhisanayso Wasaaradda Arrimaha gudaha, Dawldaha hoose iyo horumarinta reer miyiga Puntland.
Xafladda kooban oo loo qabtay dhagax dhiga xaruntaas ayaa waxaa ka soo qeyb-galay Wasiiro, agaasimayaal katirsan wasaaradaha Puntland qeybtood, haween, dhalinyaro , waxgarad iyo masuuliyiin kale , kuwaasi oo diyaar garow ugu jiray ka qeyb-galka munaasibadda dhagax dhiga.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in muhiimad gaar ah u leedahay in Wasaaradd kasta ay hesho deegaan wanaagsan oo ay ku shaqayso , arrintaana ay qeyb ka ahayd balan qaadyadii uu madaxweynuhu sameeyey waxbadan ayaana ka hirgalay balanqaadyadaas.
\_’\_’ Runtii intii aanu joognay Wasaarado badan ayaa hoy wanaagsan oo ay ku shaqeeyaan helay, waxaana kamid ah Wasaaradda warfaafinta, Wasaaradda duulista hawada iyo garoomada Puntland , Wasaaradda ganacsiga, hadana waxaan rajaynaynaa in wasaarado kale ay helaan iyana \_’\_’ Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
\_’\_’ Haygalka dawladnimo kama soo harto dadka shaqada haya iyo waxa ay ku shaqaynayaan oo deegaanku ugu horeeyo , marka waa muhiim inaan isku filaansho gaarno oo dhammaan hay\_’adaha dawliga ah helaan meelo munaasib ah oo ay ku shaqeeyan \_’\_’ Ayuu hadalka raaciyey Madaxweyne Gaas.
Madaxweyne Gaas ayaa tilmaamay in barnaamijkaan uu kamid yahay Barnaamijka isku tashiga Puntland oo uu ugu talagalay in shacabka iyo dawladuba iska kaashadaan dhismaha kaabayasha dhaqaalaha ee dalka , si loo gaaro horumar la taaban karo.
Sanadkaan gudihiisa ayaa lagu wadaa in mashruucaan uu hirgalo , guud ahaan Puntland waxaa hada si habsami leh uga socda mashaariic badan oo horumarineed in badan oo kamid ah mashaariicdaasi ay kamid yihiin balanqaadyadii uu sameeyey Madaxweynuhu oo hirgalaya.
Musharax Daahir Shidane oo si adag uga soo-horjeestay qorshaha maamul u samaynta Gobollada Dhexe